पात्रोले लोप्पा ख्वाएसी « News of Nepal
पात्रोले लोप्पा ख्वाएसी
पात्रोमा रातो रङले वार र गतेलाई घेरेपनि विगतका कतिपय सार्वजनिक विदालाई सरकारले लोप्पा ख्वाएको छ । त्यै भएर यो वर्ष झन्डै झन्डै सार्वजनिक विदाको खडेरी नै प¥यो । केही गरी शनिवार बाहेक अन्य दिन सरकारले विदा दियो भनेनी अचम्मै मान्ने दिन आए बा !
त्यै पनि पात्रोमा रातो घेरो र रातो अक्षर देखिएसी ‘विदा’ भन्ने आम बुझाई छ । विहीवार पात्रोमा उल्लेख भएको रातो अक्षरले आम सर्वसाधारणलाई त झुक्यायो नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र घर–घरका गृहमन्त्रीलाई पनि राम्रैसँग लोप्पा ख्वाएको छ । शेर्पा समुदायको ग्याल्पो ल्होसार भन्दै बरिष्ठदेखि कनिष्ठले शुभकामना दिएको देख्दा हिमाली भेगका शेर्पा दाजु–भाई दिदी बहिनी मात्रै होइन, अन्य धर्मावालम्वी पनि ढिलै गरी तीन छक प¥या छन् ।
शेर्पा समुदायले यसपटक गत माघ २२मैं ग्याल्पो ल्होसार मनाएको बताएका छन् । त्यसैले अब पात्रोमा दिवस पर्व उल्लेख गर्दैमा आँखा चिम्लएर पत्याउने अनि रातो घेरा देखिने वित्तिकै हतार गरेर शुभकामना दिनु भएन है ! अनि जुन पात्रो हे¥यो त्यहिमा रातो अक्षर पोत्या छ, यस्तो छुट पनि हुन्छ र भन्या । यो पनि गम्भिर गल्ती हो, बरु दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउन छानविन समिति गठन गरे कसो होला ?